Dowladda Qatar oo Ergay cusub u soo direysa Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Qatar oo Ergay cusub u soo direysa Soomaaliya
Ergay gaar ah oo ka socda dalka Qatar ayaa la filayaa inuu booqasho ku yimaado Soomaaliya billowga todobaadka soo socda, sida laga soo xigtay ilo wareedyo ka tirsan Dowladda Fadaraalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dr. Mutlaq bin Majed Al-Qahtani, oo ku magacaabban ergayga gaarka ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Qatar, u qaabilsan La Dagaalanka Argagixisada iyo Dhexdhexaadinta Khilaafyada, ayaa la filayaa inuu soo gaaro Muqdisho, si uu kulamo ula yeesho Saamileyda ku hardameysa siyaasadda dalka.
Booqashada Al-Qahtani ee isbuuca soo socda ayaa imaaneysa xili xiisad siyaasadeed ay ka dhex jirto madaxda Soomaalida, kadib go'aan muran dhaliyay oo Golaha Shacabka uu waqtiga ugu kordhiyay hay’adaha Dowladda Fadaraalka.
Warar kala duwan oo ka soo baxaya safarka Dr. Mutlaq, ayaa tibaaxaya inuu sido fariin weyn oo uu ku caddeynayo in uusan jirin xiriir gooni ah oo Dowladda Qatar kala dhexeeya Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday, halka war kale leeyahay waxa uu imaanayaa garab siinta maamulka liicay ee Farmaajo hoggaamiyo.
Dowladaha Qatar, Itoobiya iyo Turkiga, ayaa ka gaabsaday bayaanno is dabada joog ah oo ka soo baxayay Beesha Caalamka, kuwaas oo looga hadlayay arrimaha is diiddan ee Soomaaliya, taas oo lii kordhisay shakiga la xariira calaaqaadka Qatar iyo Maamulka Farmaajo.
Dalka Qatar oo lagu xaglin jiray in uu xiriir qoto dheer la leeyahay Kooxda Al-qaacida, oo ay ka tirsan tahay Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya, ayaa isla-socod iyo ila-jaan qaad aan caadi ahayn la laheyd maamulka Farmaajo, tan iyo markii lacagtii uu ku soo baxay xilligii doorashada laga keenay dalkaas.
Sida ay ogaatay, Keydmedia Online, Al-Qahtani, wuxuu xoogga saari doonaa inuu baddelo maskaxda Mucaaradka, oo si weyn ugu celceliyay in Qatar ay lacag aan miisaaniyadda ku jirin siiso Farmaajo, iyadoo u soo marsiisa Taliyaha NISA Fahad Yaasiin.
Inkastoo Al-Qahtani loo aqoonsan yahay dhexdhexaadiye dhameystiran oo UN-ku ku abaal marisay Abaalmarinta Wadaxaajoodka ugu Wanaagsan sanadka 2020, kadib doorka wax ku oolka ahaa ee uu ka qaatay heshiiskii nabada ee Mareykanka iyo Taliban, ayaa waxaa soo baxa walaac hoose oo mucaaradku ka qabaan Ergeygaan.